खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन
सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई यथावत् राख्दै बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेट खर्चमा संंशोधन गरेको छ । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यभन्दा २६ अर्ब कम अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ, जुन रकम विनियोजनको ९१. २ प्रतिशत हुन आउँछ ।
‘उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, शतप्रतिशत फाइदा’
लगानी बोर्डले नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोग गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारेको सामग्रीमा लगानीका लागि अवसर नै अवसर भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोगका लागि आह्वान गरेको हो ।
नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता
नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोसहरफ हुसैन भुईयानले मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रको हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बंगलादेशकी राजदूत मसेफ बिन्टे सामसमेत उपस्थित थिए । सम्झौतापछि रोजगारी तथा व्यापारका लागि एक देशको नागरिकले अर्को देशमा बसेर आर्जन गरेको सम्पत्ति सोही देशमा मात्रै कर तिर्दा हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा देशमा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गरे लगानीकर्तालाई उचित वातावरण हुने भएपछि दुवै मुलुकले दोहोरो कर तिर्न नपर्ने गरी सम्झौता गरेका हुन् ।
चिया बेचेरै सन्तानलाई उच्च शिक्षा
व्यापार–व्यवसाय गरेर घरजग्गा जोड्ने, बैंकमा पैसा राख्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा विलासी जीवन बिताउने प्रशस्तै हुन्छन् । तर, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका ४७ वर्षीय सुखराम प्रजापतिले भने चिया बेचेर धनसम्पत्ति जोडेनन्, बरु पैसा बचाउँदै छोराहरूलाई इन्जिनियरिङ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सम्म पढाएका छन् ।
मंगलबार, फाल्गुन २१, २०७५
ग्यास उद्योगीलाई वार्तामा आउन आह्वान
नेपाल आयल निगमले आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीका मागबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरी वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । निगमले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी व्यवसायीका मागका बारेमा अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको र वार्ताका लागि आह्वान गरेको जनाएको हो ।
तरकारी खेतीबाटै लाखौं आम्दानी
सल्यानको शारदा नगरपालिका–५ रातामाटाका कृषक कालीबहादुर रेउलेले तरकारी खेती गर्न सुरु गरेको लामो समय भयो । १५ वर्षसम्म मौसमी तरकारी खेती गरेका रेउलेले विगत २ वर्षदेखि बेमौसमी तरकारी पनि गर्न थालेका छन् । थोरै लगानी र कम जमिनमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि आफूले बेमौसमी तरकारी लगाउन सुरु गरेको उनले बताए ।
इजरायलको सीपले बगरमा हरियाली
६ वर्षको इजरायल बसाइपछि २०६८ सालमा हेटौंडा–१४ का सानु मुक्तान ६० लाख रूपैयाँ कमाएर नेपाल फर्किए । पैसा मात्र होइन, उनले जीवनभर गरी खान सक्ने सीप पनि बोकेर आएका थिए । त्यही सीपको सदुपयोग गर्दै उनी अहिले जिल्लाकै एक उदाहरणीय कृषकको रूपमा कहलिन सफल भएका छन् ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिने
भीमेश्वर नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन र खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । किसानलाई कृषि पेशामा प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकाले अनुदान दिन लागेको हो । पशुपालन र खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन लागिएको हो । नगरपालिकाले बाख्रापालन, गाईभैंसीपालन र कुखुरापालनका लागि अनुदान दिने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आमा सुरक्षाको बजेट नै अपुग
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नभएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा १२ करोड ८४ लाख रूपैयाँ बजेट अपुग भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जानकारी दिएको हो । बजेट पर्याप्त नहुँदा ८८ वटा स्थानीय तहले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैनन् ।
‘२५ वर्षभित्र दिगो समृद्धि र सुख’
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अघि बढाएको सरकारले २५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको दिगोपनसहितको लक्ष्य तयार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचसम्बन्धी मस्यौदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गचित्रमा ५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना, त्यसको १० वर्षपछि समृद्धि र सुखको तीव्रता÷दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र अर्को १० वर्षभित्र समृृद्धि र सुखको दिगोपन हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१२ स्थानीय सरकारले मनाए अन्तर्राष्ट्रिय खुला तथ्यांक दिवस
देशका विभिन्न स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय खुला तथ्यांक दिवस २०७५ मनाएका छन् । प्रत्येक वर्ष मार्चको पहिलो शनिबार विश्वव्यापीरूपमा खुला तथ्यांकको महत्व र यसका प्रयोगका बारेमा जोड दिइ यो दिवस मनाइने गरिएको छ । यो वर्ष नेपालका १२ वटा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन् । नेपालका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको तहमा पहिलो पटक संयुक्तरूपमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
राजस्व परामर्श समिति गठन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गर्ने करका दरबारे अध्ययन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । कर र करका दरबारेको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा उपसमितिसमेत गठन गरेको हो ।
प्राङ्गारिक कृषि प्रदर्शनी मेला सम्पन्न
‘प्राङ्गारिक कृषि पद्धती अपनाऔं, माटो र जीवन बचाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ ललितपुरको जावलाखेल मैदानमा फागुन १६ गतेदेखि सुरु भएको बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि प्रदर्शनी मेला आइतबार सम्पन्न भएको छ । कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रको आयोजनामा भएको चार दिने प्राङ्गारिक कृषि मेलामा प्राङ्गारिक कृषिबारे जनचेतना जगाउन कलाकार बबिता बानियाँ (जेरी) समूहरूद्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको र प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सूचनाहरू र प्रस्तुतीकरण भएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ वासुदेव शर्माले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्न चिनियाँ टोली आउँदै
पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । पेट्रोलियम खानी अन्वेषणका लागि हालै बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक महिनाभित्र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोली नेपाल आउने खानी विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।